Nahoana ary ny fomba ampivoarana ny SEO amin'ny Marketing sy ny tambajotra sosialy - Tactics From Semalt
Raha ny momba ny fanatsarana ny SEO, tsy tsiambaratelo fa ny votoaty dia mpanjaka. nyNy votoatin'ny tranonkala dia tokony hifanaraka, hampahafantarana ary hitadiavana ireo fitaovam-pikarohana mba handinihana ny fisian'ny toerana misy anao. Nandritra ny taona maro,Na dia izany aza, ny haino aman-jery sosialy dia niditra tao amin'ny sary ihany koa, ary ampiasaina amin'izao fotoana izao ireo mari-pamantarana hanamafisana kokoa ny fikarohana nataonao - long term care insurance payment options.Mazava tsara ny mahita fa ny seho SEO, ny dokambarotra sy ny tambajotra sosialy dia miasa amin'ny tànana manatsara ny satan'ny tranonkalan'ny orinasa.
Mba hanaovana izany mazava kokoa, dia misy toro-hevitra 5 tsara indrindra, hoy i Andrew Dyhan,ny Sampan-draharaha Mpanantanteraka Successor an'ny Semalt ,mba hanampy amin'ny fanatsarana ny SEO miaraka amin'ny mediam-baovao sy media sosialy.
1. Ny fanehoan-kevitra ao amin'ny Twitter
Tsy ny votoaty ao amin'ny tranonkalanao ihany no manampy ny Google hanondro ny tranokalanao.Arakaraky ny bitsikao, ary ny olona maro dia mizara ny bitsikao, ny safidinao kokoa ny manosika ny laharan-tariby. Ny toetra goavana amin'nyNy tranonkala manerantany dia midika fa ny dingana maro dia ampiasaina mba hanangonana ny fampahalalam-baovao rehetra ary halefa amin'ny rafitra izay azo henoina.Ny mpitsikera an'i Google dia manan-danja amin'ny fanampiana amin'ity fanasokajiana ity, ary ankehitriny izy ireo dia mijery ny votoaty avy amin'ny kaonty Twitter. Ary noho izanyAtaovy ny ankamaroan'ny Twitter-nao ary alefao ny bitsika!
2. Ampivoanao ny sehatra media sosialy hahazoana fifandraisana tsara
Satria miezaka ny mitondra fitaovana ilaina amin'ny olona ny motera mitadyRaha mila izany izy ireo dia miankina amin'ny media sosialy hanampy. Ny fifandraisana bebe kokoa amin'ny tranonkala iray dia ny mampiseho fa mahita ny tranonkala ny olonamifanaraka. Indrisy anefa fa maro ny olona no nanararaotra izany tamin'ny lasa ary nandray anjara tamin'ny teknolojia mainty-hato SEO hanamafisana ny fomban'ny tranonkala.Izany dia nitarika ny fitadiavana fitaovana hiketrika amin'ny media sosialy ho fanampiana..Ny fitaovan'ny fikarohana ankehitriny dia mijery famantarana ara-tsosialy toy ny Facebook, Tweets,Google + 1s mba hijery tsara ny toerana misy ny tranonkalanao, ary ny fomba hametrahana azy mifanaraka amin'izany.
3. Ampiasao ny media sosialy hanatsara ny fitokisanao
Ny fitaovam-pikarohana amin'izao andro izao dia tsy mijery ny votoaty ao amin'ny tranokalanao na ny blôginao.Mijery ny sehatry ny media sosialy ihany koa izy ireo. Ny fomba fiarahan'ny olona amin'ny votoatinao, ary koa ny habetsahan'ny olona mifandraymiverina aminao. Ny fiheveran'ny mpihaino sy ny fitaoman-dry zareo koa dia raisina an-tsaina ihany koa, koa mandany fotoana hanatsarana ny fahatongavanaotahaka ny fitomboan'ny mpihaino anao.
Ampioreno ny mombamomba anao Google+, afahanao isan'andro ary Google dia ho faly aminao.Ampahafantaro ireo vondrom-piarahamonina sy ny votoatiny mifanaraka amin'izany, zarao ny mombamomba anao, mazotoa fotsiny amin'ny mombamomba anao Google+ Ataovy azo antoka ny votoatinyNy fizarana ao amin'ny Google+ anao dia ny votoaty tianao hotovana.
5. Hamafiso sy mifanentana ny lalao SEO
Rehefa miresaka momba ny SEO sy ny votoatiny, zavatra toy ny teny fanalahidy, famaritana meta, altfametrahana sary, ary ny isa ao amin'ny bilaoginao dia manoratra ny zava-drehetra. Na izany aza, niova kely ny toe-javatra. Ny milina fikarohana diaAmin'izao fotoana izao dia miahiahy bebe kokoa amin'ny maha-zava-dehibe ny votoatinao. Tsy ny momba ny teny fanalahidy fotsiny ihany, fa ny momba ny fomba ahafahanao mamaly ny valinymanontany ny olona. SEO dia mamadika ny karazana votoaty hita ao amin'ny valiny. Ataovy azo antoka tsara izanyNy votoaty dia mety araka ny tokony ho izy.
SEO, tranokala votoaty, ary media sosialy dia tsy misy ifandraisany. Raha misy, dia izy ireodia mihamitombo hatrany hatrany ireo taona lasa. Izy rehetra dia manampy amin'ny fampivoarana ny SEO sy ny habaka ary tokony horaisinamiaraka amin'ny tetik'asa ara-barotra amin'ny tranokala.